ဖူးနုသဈ: စကားလုံးတှေ သိပျမလိုဘူး
အင်း.... ဖတ်ရတာ အသက်ထက်ဝက်လောက် နုပျိုသွားတယ်ဗျာ။း-)
နီးစပ်ရာထဲက ဟိုလူကြီးကိုတောင် သတိရတယ်
ဒီပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို သီချင်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုလိုပဲ စိတ်ထဲ ထင်မိနေတယ်.. ဟုတ်ရင် အဲ့သီချင်း ဆိုပါ။
ဇာတ်လမ်းထဲကလူ ၂ ယောက်ကို 20 မပြည့်သေးတဲ့သူနှစ်ယောက်လို့ ယူဆမိတယ်.. အသုံးအနှုံးကျတော့ 30 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်လို့ဖြစ်နေတယ်..
ချစ်စရာဇာတ်လမ်းလေးပါ လို့ ပြောဖို့ မေ့ကျန်ခဲ့လို့
ထူးအိမ်သင် သီချင်းလေ မဆင်။ :)
မဝေ တော်ပါတယ်၊ အချစ်ကိုရယူတတ်လို့
ကိုကျော်လည်း တခြားနိုင်ငံထွက်ဖြစ်မယ် မထင်ဘူး၊
feel like missing something after reading....
အစောကြီးကထည်းက ရည်းစားစကားပြောရမှာ သိတ်နေးတယ်။
ဗီလိန် မပါတော့ ဖတ်ရတာ တခုခု လိုနေသလိုပဲ။
တခုခုကိုသိနေသလိုပဲ။ ဆက်ရန်ရှိသေးတယ်လို.ထင်တယ်။ :) I think Ko Kyaw is going oversea frequently but still lives in that Country. How about Ma Wai? Are they together or........ !!
Last time I wish they were together forever!!
အဟဲ။ ဒါ ကျွန်တော့် ဇာတ်လမ်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုကျော်ရဲ့ Character က ကျွန်တော်နဲ့ သွားဆင် နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အဲဒီလောက် လက်မသွက် ပါဘူး။ :D
hahaha.... တော်သေးတာပေါ့ ဆင်ရုံပဲဆင်လို.။ That's why I totally do not agree with the ending part. လက်သွက် သင့်တယ် မောင်ဇက်တီရယ်။
"ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အဲဒီလောက် လက်မသွက် ပါဘူး။"
ha ha... I know you very well dear :D
ဟားဟား.. ကိုဇက်တီပို့စ်တွေဖတ်ရင် ဖောင့်ပြောင်းဖတ်ရတယ်၊ ဒါကြောင့် ဇော်ဂျီနဲ့ရေးတာများတဲ့ ကော်မန့်တွေကို မဖတ်ဖြစ်ဘူး၊ ဒီပို့စ်တော့ ကော်မန့်တွေဖတ်ချင်တာနဲ့ ဖောင့်ပြန်ပြောင်းပြီး အကုန် ဖတ်လိုက်တယ်ဗျား၊ ဇာတ်လိုက်ရော မင်းသမီးရော မျက်စိထဲပေါ်လာသလို ရေးနိုင်တယ်ကိုယ့်ဆရာ။